Midina Ny Hofantranon’ny Mpianatra, Afa-tsy Ao Parisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2014 2:43 GMT
Vakio amin'ny teny polski, English, Español, Português, русский, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Français
HBM an'ny “Office de la Ville de Paris”, Boriborintany faha-13 ao Parisy – sary avy amin'i David Monniaux – CC BY-SA 3.0
Raha nandriry ny taona maro nifanesy, lafo dia lafo ny hofantranon'ny mpianatra nanerana an'i Frantsa, dia toa tsy nisy kosa io fisondrotana io tamin'ity taona ity. Vaovao tsara ho an'ireo mpianatra, ankoatra ireo ao Parisy. Mbola mijanona ho ny lafo indrindra araka izany ny trano ao Parisy izay tsy mahatsiaro ho voakasik'izay hetsika fampidinana mihitsy. Tranga miavaka miteraka fanontaniana.
Niteraka tahotra sy ahiahy efa hatry ny ela ny hofantranon'ny mpianatra. Raha toy ny mitady fanjaitra ao anaty mololo izany hoe mitady zavatra mora izany, dia ny hofantrano no tena mbola mahakenda ny ray aman-dreny. Kanefa, toa hita tamin'ity taona ity fa mizotra mankany amin'ny fihenàny ny hofantrano raha ireny trano ho an'ny mpianatra ireny. Izay aloha no tsapa raha ny voka-panadihadiana azo avy amin'ny Location-etudiant.fr, tranonkala iray miompana amin'ny resaka fampiantranoana/fampitaovana ho an'ny mpianatra.
Inona ireo vokatra tena matotra avy amin'ilay fanadihadiana ? Any amin'ireo tanàna any amin'ny faritany no tena voamarika indrindra ny fiovàna, satria tanàna 13 tamin'ireo 20 naraha-maso no nisy fihenàna. Toulouse ohatra, nidina 15 % , raha tao Marseille sy Nice kosa nidina 12 % :
Endrika fihenàna tsy mbola nisy toa azy tato anatn'ny folo taona farany mikasika ireo toerana kelikely no atrehantsika. Raha ampitahaina amin'ny toerana nisy azy tamin'ny Aogositra 2013, ny hofantrano Aogositra 2014 dia nisy fidinany izay niparitaka hatrany amin'ireo tanàn-dehibe frantsay, afa-tsy Parisy
Manamafy i Brice Boullet, mpanorina ny Location-etudiant.fr.
tarehimarika momba ny hofantranon'ny mpianatra ao Frantsa – avy amin'ny location-etudiant.fr
Parisy, tsy miraika amin'izay fironana misy
Eo no tena olana. Raha toa ka hita any rehetra any ilay fironana, ny renivohitra kosa tsy miraika amin'izany mihitsy. Mbola ratsy lavitra, mitohy misondrotra ny hofantrano. Ho anà efitrano “studio” iray ohatra, mila mamoaka 744 euros eo ho eo, manome fisondrotana eo amin'ny 0,5 % raha mitaha amin'ny taona lasa. Ho anà efitrano 2, tsy maintsy manomana 1 249 euros, izany hoe fisondrotana 3,7 %. Ilaina alàna sarona ny anton'io fisondrotana tsy mijanona io.
Ny mety ho tena antony, nefa mifanohitra amin'ny tokony ho izy, dia ny fanampiana omena ireo mpianatra. Ireny fanampiana ireny no toa ahafahan'ny tompontrano manondrotra ny hofany, tsy manosika akory an'ireo mpianatra hihetsika/haneho hevitra. Raha toa ny lalàna Alur ka noheverina hametra ny ambony indrindra amin'ny hofan'ireo toerana bitika, toa sahala amin'ny tsy mitondra mankaiza sy tsy hisy vokany io lalàna io. Manamafy i Brice Boullet mikasika ireo lalàna mametra ny ambony indrindra amin'ny hofantrano fa :
Tsy mahataitra, na kely akory aza, ireo tompontrano ireny lalàna ireny. Voalohany, satria tsy mahomby: tsy manana fomba ho entiny manara-maso ny fampanajàna azy akory ny fanjakana, fantatry ny rehetra izany. Ary arakaraky ny maha-lafo ny hofantrano no ahazoan'ilay mpianatra fanampiana.
Mikatso araka izany ny raharaha, indrindra fa tsy mihena ny fangatahana trano ho an'ny mpianatra. Ho anà raharaha henjana, vahaolana henjana, amin'ny voalohany dia azon'ny governemanta atao tsara ny miainga amin'ny fampidinana ny fanampiana ho an'ny trano fonenana mba handresena lahatra ny mpianatra tsy hanofa trano tsy taka-bidy. Rehefa tratry ny fihenàn'ny tinady, dia tsy maintsy hiditra amin'ny fampihenàna hofantrano ihany ny tompontrano raha tsy te-handosiran'ny mpanofa. Fepetra henjana izay tsy maintsy hiteraka fanoherana avy amin'ny mpianatra aloha, ary avy eo avy amin'ny mpanofa.
7 ora izayAngletera